DAAWO:- Maxay kawada hadleen Madaxwayne Farmaajo iyo madaxwaynihii hore ee dalka K/Africa?. – Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
[ December 5, 2019 ] DAAWO:- CCWarsame shir jaraa’id qabtay “Xasan Daahir isagoo xanuunsan baa la kiciyay oo Kaniini la siiyay, si uu Gaal iigu xukumo, NISA ayaana ka dambaysay”.	Faalloyinka
[ December 5, 2019 ] DAAWO:- Gudoomiyaha Gobolka Bari oo udhaartay Nabadoonada Mucaaradsan Deni “Walaahi idiin ka yeeli mayno waxaad wadaan”.	Faalloyinka
[ December 5, 2019 ] Degdeg:- Warar kale oo kusoo kordhay Safarka cajiib ah ee Dhooba Daareed “Cameey oo Dowr aan caadi ahayn qaadanaya”.	Puntland
[ December 5, 2019 ] Xasan Sheikh oo Qoraal aan Caadi ahayn ku karbaashay Farmaajo “Waa Nin damac badan laakin ka yeeli mayno”.	Faalloyinka
[ December 5, 2019 ] DAAWO VIDEO:Sidee Fadeexada iska Tiri kara CC Shakuur Muqdisho U Sheegay In lagu Dilayo.	Faalloyinka
HomeFaalloyinkaDAAWO:- Maxay kawada hadleen Madaxwayne Farmaajo iyo madaxwaynihii hore ee dalka K/Africa?.
DAAWO:- Maxay kawada hadleen Madaxwayne Farmaajo iyo madaxwaynihii hore ee dalka K/Africa?.
July 20, 2019 marqaan Faalloyinka, Maqal Iyo Muuqaal, Soomaliya, Wararka maanta 9
Madaxwayne Farmaajo oo qaabilay wafdi ka socda Midowga Afrika iyo Urur Goboleedka IGAD
Posted by Villa Somalia on Saturday, July 20, 2019
DEG DEG+DAAWO: Puntland oo si adag ugu soo jawaabtay Farmaajo, kuna dhawaaqday.
QISO MURUGO LEH :Xaaskaygi Aduunka Ugu Jeclaa Iyo Dhimashadii Muqdisho Iloowi Waayey
Waxay soo jediyeen in xeer jajab lagu dhameeyo kiiska bada,
Dee yaguna sidii caadada aheyd way aqbali doonan,ileen waa nimankii amaankoda iyo masruufkoda masuulka ka ahaaye.
Aqoontu waa in ay shakhsiyaddaada iyo dabeecadda ka yeesho kuwo hufan oo sharaf iyo qaddarin kuu soo jiidaya oo kaa na soo saarto qof wax kasta oo wanaagsan aad u xeeriya oo xumaha aad iskaga dhawra – af iyo addin ba. Waxa aad aaminsatahay si hufan oo ixtiraam leh ayaa dadka loogu macneeyaa si kasta oo aan lagugu raacsanayn mise lid loogu yahay. Waa in aad dadka ka gaddo oo ka qanciso. Ruuxa aqoonta lihi marka laga dood badiyo qaab xariifnimo lagu dheehay ayuu kaga dabaashaa ama wuu qaataa laakiin kuma kaco wax sharaftiisa iyo sharafta dadka kale meel kaga dhacaya.
Mar kasta na shakhsi ahaan iyo muslim ahaan ba isu la xisaabtan oo cabbir in waxa aad aaminsantahay uu adduun iyo aakhiro ba kheyr u yahay adiga iyo eheladaada ba. In ay Soomaaliya hagaagto tuulada iyo degmada iyo gobolka aad ka soo jeeddo ayuu wanaag oo dhammi ugu jiraa sida aniga iyo qof kasta oo reer Soomaaliya ah ba. Miyir wax ku qiyaas inta aad caadifada caatada ah mar qudh ah dibedda iska taagto. Waa iga waano.
Waxii tabasho ah hab cilmiyeysan oo cadeymo buuxa oo macquul ah leh ayaa ummadda la hor keenaa. Haddii waxan oo caro, ciil iyo cunfi ahi ay idin ka keenayso dhibaatadii idin ka soo gaadhay dagaalkii sokeeye, dee dagaalkaasi muddo 30 sanadood ku dhawaad ah baa ka soo wareegtay oo Soomaali oo dhan ayuu galaaftay. Dawladdii dagaalku ka kacay na intaas in la’eg ayay maqan tahay.
Soomaalidu ka soo gudubtay marxaladdaas iyo taariikhdaas madoow ee maxaa idinka wali idin ka dhex qotomiyay? Ma dhiigga Isaaqa ayaa Soomaalida kale dhiiggooda ka fadli badan? Mise wuu ka nazahan yahay? Mise Isaaqa ayaan Soomaali kale dhiig badan ka soo galin? Iyo dhexdooda ba? Caalamka waxyaabo ka sii xun baa dad ka soo dhex dhacay oo casharadii ka qaatay oo uga na gudbay marxalad aad uga duwan ee ay kaga bogsoodeen. Soomaalidu sidaas si la’eg ayay kaga bogsoon kartaa.
Caqliga iyo aqoontu ha shaqeeyeen.
*Qoraalladayda kore waxay ku aaddan yihiin oo ka illaaway ninka Ahmed SNM ah inta la halmaasha.
Wax Sharaf ah oo ku jira xumaan dhacda oo lagu diirsado anigu ma arko. Sidii la doonaba haloo farshaxameeyo. Xumaani waa xumaan. Neceybna waa neceyb.
Waxay ka wada hadleen Bada kenya ayaa leh, Xaarmaajo edaab yeelo.
Bada , kenya ayaaa leh.. hore ayaan idinkugu sheegay ciyaaaal.
Xaar maajo, oo badii gadaaya ma aragtaaaa macaaaan.
Ma aragtaa Xaarmaajo, oo Gor gortan ku jira gadaaya bada.
DAAWO VIDEO:Xasan Daahir Aweys oo Xabsi Ka Dhex Oynaya Una Dhaartay Cabdiraxman cabdishakuur Diinta Inuu Meel Uga Dhacay.
XOG:- Maxaad kala socotaa Khilaafka cusub ee ka dhex curtay Galan iyo Abwaan oo ilma Adeer ah “Maxay isku hayaan?”.